Sweden: Masaajid 2aad oo lagu gubay Sweden - Wargane News
Home Somali News Sweden: Masaajid 2aad oo lagu gubay Sweden
Waxaa todobaad gudahiis lagu gubay dalka Sweden Masaajidkii labaad, dhacdadan ugu danbeysay ayaa saaka arooryadii hore ka dhacday magaalada Eslöv ee koonfurta dalka Sweden.
Ciidamada dab-damiska ayaa ku guuleystay inay damiyaan dabkan intuusan gebi ahaan gubin masaajidka, waxaana la sheegay inaysan cidna u dhaawacmin. Waxaana la sheegay in baaritaan booliiska ku sameenayaan dabkan.
Khamiistii lasoo dhaafay 25kii bishan December ayaa sidan oo kale loo gubay masaajidka weyn ee ku yaal magaalada Eskilstuna.
Masaajidka ayaa ahaa kan ugu badan ee ay ku tukadaan dadka Soomaalida ah ee degan Eskilistuna.
Guddoomiyaha ururka Muslimiinta dalka Sweden Cumar Mustafe ayaa sheegey in dalka Sweden ay ku soo badaneyso Islaam nacaybka dadka qaba xaaladaasi ay wel-wel ku abureyso dhamaan Muslimiinta iyada oo dalka Sweden caan ku ahaa tixgelinta afkaarta iyo diimaha kala geddisan.
Booliska amniga dalka Sweden ee loo yaqaan Säpo ayaa hadda gacanta ku haysa baaritaanka masaajidadan la gubay.
Ma ahan markii u horeysey ee masaajid waxyeelo ka soo gaarto dadka ku kacsan Muslimiinta, horey waxaa loogu gubey masaajido kale goobaha weeraradu ka dhaceen waxaa kamid ah Stockholm, Södertälje. Eskilstuna, Nörköping Flen, Avesta, Örebrö iyo magaalooyin kale oo badan., waana markii saddexaad oo isla magaalada Eskilstuna, waxyeelo loo geysto masaajid.